जाडोमा कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
जाडोमा कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधानका उपायहरु !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : २६ मंसिर २०७८ ०५:५१
कपालको हेरचाह गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउँदा पनि कपाल झर्न रोकिएन भने डाक्टरको सल्लाह लिन सकिन्छ । टुना भट्टले रातोपाटीमा लेखेका छन्।